China Open Type ဖိုက်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - XTLASER
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ပွင့်လင်းအမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဟယ်လို! ငါတို့က XTLASER! လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကုမ္ပဏီသည်လေဆာစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏နက်ရှိုင်းစွာမွေးမြူရေးကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ XTLASER သည်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ကျော်ကြားမှုကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသောဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ကို၎င်းသည်စီးပွားရေးနှင့်လက်တွေ့ကျသောဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်ခြင်းကိရိယာများဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
သင်ရွေးချယ်ရန် 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W လေဆာအရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးသုံးဒီဇိုင်းသည်လက်တွေ့ကျပြီးချွေတာသည်။ ပိုမိုခိုင်ခံ့သောသယ်ဆောင်နိုင်မှုကိုရရှိရန်တရုတ်ရိုးရာ Tenon-mortise ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုပါ။ Solder ၏ပူးတွဲတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ bearing များသည်ကြာရှည်စွာလည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။
စက်များအားလုံးသည် European Union CE authentication ကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး F အမေရိကန် FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ISO 9001.XTLASER နည်းပညာကိုဂျာမနီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ရုရှား၊ မလေးရှားနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။ open type ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အသုံးပြုသောသတ္တုပစ္စည်းများ၊ သတ္တုစာ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ လေဆာရောင်ခြည်သုံးစက်ယန္တရားများ၊ စွမ်းအင်အသစ်လီသီယမ်၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး၊ LED၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ titanium alloy, inconel, titanium alloy, စသည်တို့ကို
သတ္တုဖြတ်တောက်နိုင်သောလေဆာစက်သည်အရှိန်မြန်သောပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ cnc ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖြစ်ပြီးစက်ကိရိယာ၊ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ သုံးရိုးတံလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလည်ပတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သောခေါင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျပြီးမြန်နှုန်းမြင့်သည်။ အလူမီနီယံသံမဏိစာရွက်၏ X နှင့် Y ၀ င်ရိုးသတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာစက်ကိုမူလထုပ်ပိုးမှုဖြင့်တင်သွင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတိကျမှန်ကန်သော HIWIN linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၊ စက်အားလုံးကိုဂဟေဆော်ရန်စတုရန်းပိုက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ဆေးကြောခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်အပြည့်အ ၀ ပူးတွဲပါသောဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၊ photoelectric အာရုံခံကိရိယာနှင့်အခြားတိကျသောတည်နေရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအသ......
Fiber လေဆာဖြတ်စက်သည်မြန်သောအမြန်နှုန်းပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ cnc ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စက်ကိရိယာ၊ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ သုံးရိုးတံလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလည်ပတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သောခေါင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျပြီးမြန်နှုန်းမြင့်သည်။ အလူမီနီယမ်သံမဏိစာရွက်၏ X နှင့် Y ၀ င်ရိုး Fiber လေဆာဖြတ်စက်ကိုမူလထုတ်ပိုးမှုဖြင့်တင်သွင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတိကျမှန်ကန်သော HIWIN linear လမ်းညွှန်ရထား၊ စက်ကိုဂဟေဆော်ရန်စတုရန်းပိုက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည့် annealing ဆက်ဆံမှု၊ mesa 500 KG ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် universal ball bearing, အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အရံတပ်ရန်တပ်ဆင်ထားသောစက်အပြင်အပြည့်အဝပူးတွဲပါရှိသောဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၊ ph......
သတ္တုအတွက် Fiber Optic Laser ဖြတ်တောက်စက်
S / S၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ သွပ်ရည်ဖြည့်စာရွက်၊ Electrolytic plate၊ အလူမီနီယမ်ပြား၊ သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ အလွိုင်းပြား၊ ရှားပါးသတ္တုများနှင့်အခြားပစ္စည်းများ၊ သတ္တုအတွက် Optic laser ဖြတ်စက်၊ XTLASER ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၄၀ သို့တင်ပို့ခဲ့သည်။
Fiber Laser Cnc စက်
Fiber laser laser cnc စက်သည်အမြန်မြန်သောပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ cnc ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖြစ်ပြီးစက်ကိရိယာ၊ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ သုံးရိုးတံလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလည်ပတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သောခေါင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျပြီးမြန်နှုန်းမြင့်သည်။ အလူမီနီယံသံမဏိစာရွက်၏ X နှင့် Y ၀ င်ရိုး Fiber laser laser cnc စက်ကိုမူလထုပ်ပိုးမှုဖြင့်တင်သွင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတိကျမှန်ကန်သော HIWIN linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၊ စက်အားလုံးကိုဂဟေဆော်ရန်စတုရန်းပိုက်ဖြင့်ဖိအားလျှော့ချခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်အပြည့်အ ၀ ပူးတွဲပါသောဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၊ photoelectric အာရုံခံကိရိယာနှင့်အခြားတိကျသောတည်နေရာအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုထားသည်။
metal laser cutter သည်လျင်မြန်သောမြန်နှုန်းပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ cnc ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖြစ်ပြီးစက်ကိရိယာ၊ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ သုံးရိုးတံလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလည်ပတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သောခေါင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျပြီးမြန်နှုန်းမြင့်သည်။ အလူမီနီယံသံမဏိသံမဏိစာရွက်လေဆာဖြတ်စက်၏ X နှင့် Y ၀ င်ရိုးကိုမူရင်းထုပ်ပိုးပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးတိကျမှန်ကန်သော HIWIN linear လမ်းညွှန်ရထားများဖြင့်တင်သွင်းသည်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုလုံးကိုဂဟေဆော်ရန်စတုရန်းပိုက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ mesa 500 KG ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် universal ball bearing, အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အရံတပ်ရန်တပ်ဆင်ထားသောစက်အပြင်အပြည့်အဝပူးတွဲပါရှိသောဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၊ photoelectric sensor နှင့......
လေဆာသတ္တုဖြတ်တောက်နိုင်သောစက်သည်အရှိန်မြန်သောပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ cnc ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်ဖြစ်ပြီးစက်ကိရိယာ၊ ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအထောက်အကူပြုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ သုံးရိုးတံလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလည်ပတ်ရန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားဖြင့်ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်သောခေါင်းသို့မောင်းနှင်နိုင်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်။ တိကျပြီးမြန်နှုန်းမြင့်သည်။ အလူမီနီယမ်သံမဏိအထူသံမဏိပြားလေဆာဖြင့်ဖြတ်တောက်သည့်စက်၏ X နှင့် Y ၀ င်ရိုးကိုမူလထုပ်ပိုးမှုဖြင့်တင်သွင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးတိကျမှန်ကန်သော HIWIN linear လမ်းညွှန်ရထားများ၊ စက်အားလုံးကိုဂဟေဆော်ရန်စတုရန်းပိုက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ဆေးကြောခြင်း၊ ထုတ်ကုန်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်အပြည့်အ ၀ ပူးတွဲပါသောဖုန်မှုန့်ကာကွယ်သည့်ကိရိယာ၊ photoelectric အာရုံခံကိရိယာနှင့်အခြားတိကျသောတည်နေရာအစိတ်အပိုင်းမျာ......
XTLASER သည်ကျော်ကြားသော ပွင့်လင်းအမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ဖန်စီဒီဇိုင်းများရှိသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ပွင့်လင်းအမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် CE အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ပွင့်လင်းအမျိုးအစားဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!